पानी माग्ने निहुँमा प्रेम प्रस्ताव ! – Yug Aahwan Daily
पानी माग्ने निहुँमा प्रेम प्रस्ताव !
युग संवाददाता । ५ भाद्र २०७८, शनिबार १७:०७ मा प्रकाशित
विवाह हुन लगन जुर्नुपर्छ भन्छन् । अर्थात कसैले चाहेर मात्र विहे सम्भव हुँदैन पनि । मन पराएको मान्छेसँग नै विहे हुन्छ भन्ने पनि छैन । तर जब मन र विचार मिल्छ, तब एकले अर्काको लागि जीउने कसम खान्छन् । अर्काको लागि नै जीवन समर्पण पनि गर्दछन् । जहाँ विश्वास, त्यहाँ माया गहिरो बन्दै जान्छ । जसको विश्वास र माया छ, त्यो जोडीको सम्बन्ध सफल हुन्छ र जीवन पनि सहज हुन्छ । यस्तै एउटा जोडी हो चित्र भट्टराई र टिका थापाको । प्रस्तुत छ, यो जोडिसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
चित्र भट्टराई र टिका थापा
जागिर गर्दा चिनजान
चित्र भट्टराई तत्कालिन गाविस सचिव भएर दैलेखको साविकको सिगौडी गाविसमा गए । सचिवको रुपमा कार्यरत हुँदै गर्दा टिका थापा पनि त्यहीँ ठाउँको सरस्वती मावि सिगौडीमा स्थायी नियुक्ति पाइन् ।
पढाउन जानेबेला उनीहरुबीच देखादेख भएको थियो । चित्रको साथीले टिकाको घरमा एउटा अफिस खोलेका थिए । चित्र र उनको साथी अफिस गए । त्यहीवेला उनीहरूको चिनजान भएको थियो ।
पानी माग्ने निहुँमा प्रेम प्रस्ताव
चित्रको साथीले टीका आफ्नो घरबेटीको छोरी भएको भन्दै चिनाए । अनि टिकासँगै विवाह गर्नुपर्यो भनेर चित्रलाई प्रस्ताव राख्न पनि सुझाए । चित्रले पनि साथीको सुझावपछि विस्तारै टिकाको सबै कुरा मन पराउन थाले ।
अनि आफ्नो साथीको सुझाव अनुसार उनले केही दिनपछि टिकालाई बोलाए । पानी माग्ने निहुँमा बोलाएका उनले टिकालाई आफूले मन पराएको कुरा पनि भने । टिकाले अचम्म मान्दै केहीबेर त सोचिन् । र त्यसको जवाफ पनि दिइन् ।
टिकाले स्थायी जागिरमा संलग्न व्यक्तिसँग विवाह गर्दा जीवन सहज हुने ठानेपछि उनले चित्रको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिन् । अनि उनीहरुबीचमा नियमित भेटघाट हुन थाल्यो । एकअर्काको केयरसमेत गर्न थाले । उनीहरुबीचमा जीवनलाइ सहज बनाउने सन्दर्भमा समेत कुराकानी हुन्थ्यो ।
उनीहरुले ६ महिनासम्म प्रेम सम्बन्ध राखे । आफुहरुले एकअर्कालाई मन पराएको कुरा आआफ्नो घरमासमेत जानकारी गराए । दुबैका घरपरिवारले जानकारी पाएपछि मागेरै विवाह गर्ने सहमति भयो । चित्रको घरबाट टिकाको हात माग्न गए ।
दुवै परिवारको सहमति अनुसार उनीहरूको विवाह गरिदिने पक्का भएपछि उनीहरुले प्रेम गरेको ६ महिनापछि २०६२ मंसिरमा विवाह बन्धनमा बाँधिए । विवाह गर्दा उनीहरु दुवै जना २८ वर्षका थिए । बुहारी भएर जाँदा टिकालाई केही असहज भएको थियो । तर चित्रका घर परिवारको माया र साथले उनलाई सहज भयो ।
विबाहपछि उनीहरु दुवै जनाले जीवनलाई सहज बनाउन संघर्ष गरे । एकातिर जागिरे जीवन काम गर्नुपर्ने । अर्कोतिर घर परिवार चलाउनुपर्ने थियो । दुवै जनाको जागिर भएकाले आर्थिक अभाव भने त्यति झेल्नु परेज ।
तर पनि जीवनलाई सहज बनाउन भने उनीहरूले नियमित संघर्ष गर्नुपर्यो । छोराछोरीको स्याहार सुसारदेखि आफ्नो जागिर जीवनलाई सँगै लैजान सहज थिएन । उनीहरु अहिले दुबै जना सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । अहिले उनीहरु सन्तुष्ट छन् । उनीहरु भन्छन, जीवनलाई सहज बनाउन संघर्ष गर्नुपर्छ ।
बुवा उदयराज भट्टराई र आमा कौशिला भट्टराईको कोखबाट विंसं २०३५ साल पुस महिनाको २२ गते दैलेखको दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर १३ मालिकामा चित्र भट्टराईको जन्म भएको हो । उनको बाल्यकाल दुखले बित्यो । उनी पाँच महिना हुँदा उनको बुवाको निधन भयो ।
उनी आफ्नो काकाकाकीको संरक्षणमा पालनपोषित भएका थिए । उनका पाँच भाइ बहिनी थिए । सानो कक्षा गाउँमै पढेका उनले पढाइमा ध्यान दिन्थे । उनले विएड नारायण क्याम्पस दैलेखबाट गरेका हुन् ।
पढेर ठुलो मान्छे बन्ने लक्ष्यका साथ उनले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै लोकसेवा तयारीसमेत गरे । लामो मेहेनतपछि उनी स्थायी जागिरे पनि भए । उनलाई गाउँमा भद्र मान्छे मान्थे । यता बुवा जगतजंग थापा र आमा सरस्वती देवी थापाको कोखबाट विक्रम संवत् २०३४ साल माघ १६ गते नारायण नगरपालिका दैलेखमा टिका थापाको जन्म भएको हो ।
उनको बाल्यकाल दैलेखमै वित्यो । सरल र इमान्दार स्वभावकी उनका ६ दिदीबहिनी थिए । पाँच कक्षासम्म जनता मावि दैलेखमा पढेकी उनले ६ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म त्रिभुवन माविबाट पास गरिन् । विएड र एमएड भने शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतबाट गरेकी हुन् । २०५६ सालदेखि अस्थायी शिक्षक भएर काम गरेकी उनी अहिले सरस्वती मावि सिगौडीमा स्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन् ।
यो जोडीले जुनसुकै काम गर्दा पनि सल्लाह र आपसी समझदारीमा गर्दछन् । काम गर्नुभन्दा पहिले उनीहरु बिचमा छलफल हुन्छ । र काम बाँडफाँड गरेर अगाडी बढाउने गर्दछन् । उनीहरुको योजना जहिले पनि समझदारीमा हुने गर्दछन् ।
सानो सानो कुरामा पनि सरसल्लाह गरेर काम गर्छन् । दुबै जना हरेक काम गर्दा एकअर्काको सहकार्य र सहयोग विना कुनै काम गर्दैनन् । यो जोडी कहिलेकाँही फुर्सद मिलाएर रमाइला ठाउँहरुमा घुम्न पनि जान्छन् । घरको खाना बनाउने काम पनि बाँडफाँड गरेर दुबै जनाले काम गर्छन् । सहयोगी स्वभाव र राम्रा ठाउँ घुम्न पनि लैजाने चित्रको बानी टिकालाई धेरै मनपर्छ ।
आफन्त साथीभाईलाई टिकाले राम्रो व्यवहार गर्छिन् । त्यो बानी चित्रलाई मनपर्छ । आपसी विश्वास र सहकार्यले नै सम्बन्धमा खटपट नल्याउने उनीहरुको बुझाइ छ । त्यही भएर नै उनीहरु सफल जोडी बन्न सफल भएका छन् । उनीहरुले सम्बन्ध टिकाउन एकअर्कालाई विश्वास गर्नुपर्ने र जुनसुकै काममा पनि सल्लाह गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।